Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Indlela yokuchonga ngokulula uhambo oluzinzileyo
Inkqubo yePioneering Travel Sustainable Programme ibandakanya ngakumbi zonke iintlobo zepropathi kwihlabathi jikelele kwaye yenza ukufumana ulwazi oluthembekileyo oluzinzileyo lula kubathengi.
Ibheji yokuHamba eZinzileyo, umlinganiselo wozinzo othembekileyo, ohambelana nehlabathi jikelele oya kubonelela ngolwazi olunqweneleka kakhulu kubakhenkethi behlabathi lonke abafuna ukwenza ukhetho oluzinzileyo lokuhamba. Iyilwe ukuba isebenze kuluhlu olubanzi lweendidi zepropathi, ukusuka kumagumbi okuhlala, iiB&B kunye namakhaya eeholide ukuya kwiihotele, iindawo zokuchithela iiholide kunye nezindlu zemithi, kwaye zilungelelaniswe neenyani zengingqi kunye neengqwalaselo, inyathelo lokuqala lolo hlobo kushishino.
Ukuthathela ingqalelo into yokuba i-64% yabahambi bathi bafuna ukuhlala kwindawo ezinzileyo kulo nyaka uzayo kunye noluhlu olungaphezulu kwezigidi ezingama-28 kwi-Booking.com, inkampani ibona ithuba elikhulu lokubonisa ngakumbi iinzame ezinempembelelo ezithathwa ngamaqabane ukuyila. amava azinzileyo ngakumbi, kwaye kwakhona, yenza kube lula kubahambi ukuba bafumane indlela ezinzileyo yokuhlala. Ngekota ezintathu (63%) ebonisa ukuba banokukhetha indawo yokuhlala ethile ephumeza izenzo ezizinzileyo, ivuza kwaye ikhuthaza ngakumbi ababoneleli ukuba bathathe amanyathelo alandelayo kwiihambo zabo zozinzo.
"Ukwakha ishishini lokuhamba elizinzile ngokwenene kuya kuthatha ixesha, ukulungelelaniswa kunye nomzamo odibeneyo, kodwa inkqubela inokwenzeka ngokuqhubekayo ngokutsha, inkxaso yeqabane kunye nentsebenziswano yezoshishino," kusho uMarianne Gybels, uMlawuli woZinzo kwi-Booking.com. “Siyaziqonda iinzame zokuzinza zoluhlu olubanzi lweepropathi kwihlabathi liphela ngendlela ethembekileyo neselubala kubathengi. Ukubonisa izenzo abazenzayo kwenza kube lula kumntu wonke ukuba enze ukhetho olunolwazi ngakumbi kwaye ngethemba lolondolozo lohambo lwabo olulandelayo, nokuba ufuna ukuya phi. Oku kukwakhuthaza nangakumbi kumaqabane ethu ukuba athathe inyathelo elilandelayo lokusebenza ngokuzinzileyo”.